Bavuke bazithuntutha abesifazane abasebhizinisini lokudla
UNKSZ Nokwazi Cele okwesokudla nekhasimende lakhe uNksz Nicole Bulose ISITHOMBE:SITHUNYELWE
BAVUKE bazithuntutha abesifazane abasebhizinisini lokudla, izitsha zabo ebezilele uthuli ngenxa yokuqina kwemithetho kathaqa. Kubuye inhlasi yethemba ngesikhathi uMengameli uMnuz Cyril Ramaphosa enciphisa imigomo kathaqa, wamemezela ukuthi abamabhizinisi okudla sebengawathumelela amakhasimende. Laba besifazane bathe bayazama nokulandela imigomo kathaqa.
UNksz Fikile Xaba ongumpheki nomnikazi wendawo yokudla iMafifi Leaflet Restaurant & Bara eJozini, uthe ikati belilele eziko. Uthe ushayeke kakhulu ngesikhathi kuqala uthaqa ngoba indawo yakhe idayisa notshwala. Yize eseqalile ukuthuthela amakhasimende afaka ama-oda, uthe inkulu inselelo.
"Akulula ukuhambisela ukudla abantu emakhaya, kungcono labo abasemadolobheni. Ngisendaweni enezinga eliphezulu lokwebiwa kwezimoto, okwenza ngisabe ukuthutha ukudla. Ngenxa yokuthi yisemakhaya abanye abantu abasebenzi, amanani okudla aphansi, okuzodla iphakethe uma ngihambisela amakhasimende," echaza.
Uthe uzoqhubeka nebhizinisi noma kunzima, ukwenzela ukuthi amakhasimende angamkhohlwa.
UNksz Thabi Kweyama weThabi's House Cakes, Events & Catering eHammarsdale, uthe ubesephuthwe ama-oda amaningi kwabafuna amakhekhe emicimbini yokuzalwa.
"Kube nzima ngoba ngesikhathi kumenyezelwa imigomo kathaqa bengingenaso izithako ezenele endlini. Kuthe noma sekuxegiswa imithetho, ezinye izitolo bezingenazo izithako esizisebenzisa uma sibhaka. Nokho sengiqalile ukupheka nokubhaka, ngihambisele amakhasimende. Inselelo enkulu ukuthi kuyizindleko ukuthutha ukudla, okumele ucabange ezinye izindlela ukuze ungashayeki ephaketheni," kuchaza yena.
UKHALA ngenselelo yokuba semakhaya uNksz Fikile Xaba onendawo yokudla, osekudingeka athuthele amakhasimende ukudla njengoba sekuvunyelwe esigabeni sesine sikathaqa ISITHOMBE:FACEBOOK --
UNksz Kweyama uthe usenqume ukupheka okuyisikalo esikhulu ukuze noma ethola ikhasimende, angalimali kakhulu ephaketheni. UBuye aphekele imicimbi nemishado, okwenze walimala kakhulu njengoba nayo imisiwe. Uveze ukuthi amanye amakhasimende abesekhokhile kwadingeka awabuyisele imali.
UNksz Nokwazi Cele weGee Gee's Cakes eThekwini, uthe uthole amakhasimende amaningana ngempelasonto yeMother's Day. Uthe ubesefile amakhasimende emkhalela efisa amakhekhe akhe kodwa evalelwe imithetho kathaqa. Njengoba sebevunyelwe ukuthutha ukudla, uthe usenamakhasimende azokwenza emakhaya imicimbi yokuzalwa neyokugubha usuku lomshado.
"Kunzima kuleli bhizinisi kodwa ngixwayisa abanye ozakwethu ukuthi bazame ukungalahlekelwa amakhasimende ngenxa yalesi sikhathi esinzima. Kumele bazame ukusebenza ngalokhu abanakho, ngeke kufane nokungenzi lutho," kusho yena.